Work from Home က ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက် - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 07/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာချိန်ကစပြီး အလုပ်တော်တော်များများက အွန်လိုင်း နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုရင်း နေအိမ်တွေကနေ ရုံးအလုပ်တွေကို လုပ်ကြရပါတယ်။ ဆွေးနွေးစရာတွေကို အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရင်း မဖြစ်မနေမှ လူချင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေကို လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးလာခဲ့သလို Work from Home ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ဆောင်နိုင်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်းကို အကောင်းဆုံး ဟန့်တားနိုင်မှာကို လက်ရှိမှာလည်း Work from Home ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးပါ။ ပုံမှန်အတိုင်း တွေးကြည့်ရင် ဒီလိုလုပ်တာက သွားလာရတဲ့ အချိန်တွေကို သက်သာစေပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်တယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် အချိန်ကာလ အတော်လေးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေရှိလာတာကို ခံစားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်က မနက်ခင်း စောစောထတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်။ ရေချိုးတယ်။ မနက်စာစားတယ်။ ရုံးသွားတယ်။ အလုပ်တွေကို စီကာစဉ်ကာလုပ်တယ်။ နေ့လယ်စာစားချိန်မှာ နေ့လယ်စာစားပြီး ညနေရုံးဆင်းချိန်မှာ အိမ်ပြန်လာပါတယ်။
ရုံးဆင်းပြီဆိုရင် အလုပ်က ပြီးသွားပြီလို့ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်လို့ရပြီး ရုံးကနေ အိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်က ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေါ့။ WFH ကာလမှာတော့ အချိန်တိုင်းက အလုပ်ချိန်လို ခံစားမိနေသလို အလုပ်စားပွဲ သီးသန့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိသူတွေအတွက်ကတော့ လက်ပ်တော့ တစ်လုံးချလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းက အလုပ်စားပွဲ ဖြစ်နေတော့တာပါ။ ဒီလို အလုပ်လုပ်နေတာက ပိုသက်သာတယ်လို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ Work from Home က ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲ……..ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာလေးတွေကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Work from Home က ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်နေသလဲ…….
အလုပ်ချိန် နားချိန် မသဲကွဲတော့ဘဲ အလုပ်စားပွဲရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိတဲ့ Work from Home အလုပ်ခွင် Life က ရေရှည်မှာ ဒါတွေ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
ဒါက လူတိုင်းလိုလို ခံစားရမယ့် ကျန်းမာရေးပြဿနာပါ။ ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆရပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်တဲ့ အလုပ်စားပွဲကြောင့် ခါးနာတာ၊ ကြွက်သားတွေ နာတာကစလို့ နောက်ဆုံး လက်ပြင်ကုန်းတာလိုမျိုး ကိုယ်နေဟန်ထား မမှန်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ အရိုးအဆစ် နာကျင်တာက သေချာဂရုမစိုက်ဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် အခန့်မသင့်တိုင်း ပြန်ခံစားရတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းနာကတည်းက သေချာလေး ဂရုစိုက် ကုသဖို့ လိုပါမယ်။
ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်မလဲ……
ကြွက်သားနဲ့ အရိုးအဆစ်တွေ နာတာကို သက်သာစေဖို့ဆိုရင်
ပုံမှန် အကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
အလုပ်ချိန် သေချာ သတ်မှတ်ပါ
အလုပ်စားပွဲကို ကိုယ်နေဟန်ထား မှန်အောင် ဂရုစိုက်ပါ
တောင့်တင်းနာကျင်နေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ရေအေးဝတ်ကပ်ပါ
ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပါ။ ရေနွေးဝတ်ကပ်ပါ
အကိုက်အခဲ သက်သာစေတဲ့ ဆေးလိမ်းပါ။ ဖြန်းဆေး ဖြန်းပါ။
တော်တော်များများ အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်နေဟန်ထား မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်မိတာက ရှားပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ လှဲရင်း အလုပ်လုပ်တာမျိုး၊ ထိုင်ရအဆင်ပြေတဲ့ နေရာတစ်ခုခုမှာ ထိုင်လုပ်တာမျိုးက များပါတယ်။
တစ်နေကုန် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတာကြောင့် ရုံးမှာ လုပ်သလို တစ်ဦးဦးဆီ လမ်းလျှောက်သွားပြီး လိုအပ်တာတွေကို ပြောတာ မေးတာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် လှုပ်ရှားမှု နည်းသွားပါတယ်။ လိုတာကို chat box ကနေပဲ လှမ်းမေးလိုက်တာများတယ်လေ။ ရုံးဆင်းရုံးတက် လမ်းလျှောက်တာမျိုးလည်း မရှိသလောက် နည်းလာပြီး လှုပ်ရှားမှု နည်းလာရင်းက အဝလွန်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မနက်ခင်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
ခွေးလေးမွေးထားမယ်ဆိုရင် အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ (ဒီကာလဆိုတော့ မတ်ခ်တပ်သွားဖို့ မမေ့နဲ့နော်)
တစ်ချိန်လုံး ထိုင်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားပေးပါ
လှုပ်ရှားမှု ရှိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
ဘယ်မှ မသွားရဘဲ တစ်ချိန်လုံး အိမ်ထဲ ပိတ်မိနေရတာက အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်လာနိုင်သလို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပါ ထိခိုက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ လူက အလိုလိုနေရင်း စိတ်တိုလာတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ချိန် နားချိန် ခွဲခြား သတ်မှတ်ပါ
သီချင်းနားထောင်ပါ (လိုက်အော်ဆိုတာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေစေပါတယ်)
အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အင်တာနက်က အဆင်ပြေပါ့မလား။ မီးက ပျက်မလားဆိုတာတွေအပြင် သတင်းဆိုးတွေကို ဆက်တိုက်ကြားနေရတာတွေက စိုးရိမ်စိတ်တွေ များလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်စိတ်များတာက ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို အလုပ်ခွင်မှာ အဆင်မပြေတာ၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ကျတာတွေကိုပါ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ချိန် နားချိန်ကို မခွဲခြားဘဲ လုပ်နေတာက ရေရှည်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ လုံးဝ အားအင်ကုန်ခမ်းသွားတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ခံစားရတဲ့အခါ အလုပ်တွေ ကြာလာတာ၊ အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်စံမ်း မရှိသလို ခံစားရပြီး စိတ်ဓာတ်ကျလာနိုင်ပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေ ဖန်တီးပါ။
ကဲ……. Work from Home ကြောင့် ကျန်းမာရေး မထိခိုက်စေဖို့ ဒါလေးတွေ သတိထားပေးပါ။
Impacts of Working From Home During COVID-19 Pandemic on Physical and Mental Well-Being of Office Workstation Users https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7934324/ Accessed Date 14 September 2021
3 Surprising Health Risks of Working From Home https://www.verywellhealth.com/remote-work-health-risks-5080056 Accessed Date 14 September 2021
The surprising health effects of working from home https://www.mdlinx.com/article/the-surprising-health-effects-of-working-from-home/tsastCACwiPt6Al4ONUZL Accessed Date 14 September 2021